News - Dubai Big 5 ngosi
The Middle East Concrete 2019 / The Big 5 Heavy 2019, nke emere na 25-28 Nov 2019 na Dubai United Arab Emirates, bịara na njedebe. Tupu mbido ihe ngosi ahụ, Yantai Jiwei mere nkwadebe zuru oke maka ngosi ahụ. Anyị na-ebute mma mgbe niile, anyị agaghị emechu ndị ahịa anyị ihu. Anyị na-adabere na klas mbụ, klas mbụ na teknụzụ, ndị otu na otu ọrụ nkwụsị iji chekwaa ego maka ndị ahịa ma na-ejigide ogo dị elu. Anyị na-eji ezi obi anyị ekwurịta okwu na ndị ahịa ọ bụla, anyị na-atụ anya ịmebe mmekọrịta siri ike na ndị ahịa ogologo oge. Anyị bịara ngosi na ngwaahịa nke zuru oke mma.
N'oge ihe ngosi ahụ, ndị otu Jiwei agbaala mbọ inye ndị ahịa ọ bụla ọrụ dị elu, ọnụ ahịa ezi uche dị na ngwaahịa a tụkwasịrị obi. ihe karịrị ndị ahịa 100 sitere na United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Yemen, Iran, Iraq, Canada, India, Sudan, Egypt, Turkey, Kuwait gara ụlọ ntu HMB. Ruo ụbọchị ikpeazụ nke ngosi ahụ, Yantai Jiwei nwetara ọtụtụ iwu ọhụrụ na nkwado mmekọrịta na ndị na-emebi mmiri, na-atụgharị hama, mkpọmkpọ ebe na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ya, na-enweta nsonaazụ ngosi a tụrụ anya. , na inogide, ha emeriwo ịhụnanya nke ọtụtụ ndị ahịa wee nata ọtụtụ iwu, na-enweta ọnọdụ mmeri-mmeri.
Daalụ maka ndị ahịa niile gara leta HMB, ma kelee ha maka ịmara HMB ndị na-agbaji hydraulic, ma kelee Big 5 Heavy 2019. Anyị na-atụ anya maka ngosi ngosi na-esote ma nabata ndị enyi hụrụ anyị n'anya ileta HMB ọzọ. Anyị ga-anọgide na-emeziwanye ike anyị ma nọgide na-emepụta ngwaahịa ndị na-egbo mkpa ndị ahịa. Anyị nwere olile anya na Yantai Jiwei ga-abụ akara aka na ụlọ ọrụ ahụ, na-eje ozi karịa ndị ahịa ma na-eweta ngwaahịa ndị pụtara ìhè. Anyị kwenyere na Jiwei agaghị ekwe ka ị daa.